Dhegeyso: Xaalad caafimaad darro oo ka jirta deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool - Radio Ergo
Barnaamijka Dhaqtarka Raadiyaha
Barnaamijka Gobaad – Haweenka
Waayo tegay xusuustood
Maxay kugu qaadatay?
Hibada iyo hal abbuurka
Maad iyo maaweelo
Nala Soor Xırıır
Dhegeyso: Xaalad caafimaad darro oo ka jirta deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool
by Radio Ergo
in Caafimaadka, WARBIXINNO MAQAL AH
Loogada Raadiyo Ergo
Xaalad caafimaad darro oo daran ayaa kajirta deegaanka Saaxdheer ee koonfurta gobolka Sool iyo deegaano baadiye ah oo hoos yimaada, kadib markii dadka deegaankaas ay si saf mar ah ugu dhaceen xanuuno isugu jira kuwo ku dhacaya neef mareenada oo qofka naqasku qabanayo iyo shuban. xanuunadan oo soo bilowday 3 dii bishan ayaa waxaa u dhintay 4 caruur ah oo kii u danbeeyey dhintay laba habeen ka hor waxaana mudadaas xarumaha caafimaadka la geeyey 305 qof.
Hadda waxaa xanuunkan u jiifa boqol iyo laba qof oo shan iyo sodon ka mid ah ay yihiin bukaano cusub oo maanta (Arbaca 8 January 2020) yimi xarumaha caafimaadka, dadkan bukaanka ah ayaa la jiifiyey sadex qol ay leedahay xarunta caafimaadka Hooyada iyo dhalaanka ee MCH ka Saaxdheer, sadex Teendho oo laga ag dhisay xaruntaasi. halka inta kale ee bukaanadana la jiifiyey geedaha hooskooda.
Hawlwadeeno caafimaad oo ka kala yimi Puntland, Somaliland iyo dawlad deegaanka Somalida ayaa gaarey deegaanka waxayna hadda hawl wadeenadu ka cabanayaan in daawadu yartahay loona baahan yahay gurmad daawo oo degdeg ah iyo xirfadlayaal caafimaad oo dheeraad ah.
Dr. Calidhux Maxamed Cabdirisaaq oo ah dhakhtar cudurada guud qaabilsan kana mid ahaa dhakhaatiir ka yimi magaalada Laascaanood oo uu ka hawlgalo cusbitaalkeeda guud ayaa Radio Ergo uga waramay xaalada deegaankaasi ka jirta.
HALKAN HOOSE ka Dhegayso Waraysiga Dr. Cali Dhuux.
Hargeysa: Carwo-bandhigeed shaqo oo kontan dhallinyarro ah ay shaqooyin ka heleen
Dhadhaab: Ardayda dhamaysa dugsiyada sare oo ku celceliya imxitaannada si ay u helaan deeq waxbarasho
Gaalkacyo: Boqollaal qof oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka
Kalkaaliso soo bandhigtay dhibaatooyinka aan jirin ee bulshadu ka aaminsan tahay caafimaadka
Baladweyne: Shan maxaabiis oo laga helay cudurka karoona
Kismaayo: Haweenay la nool HIV/AIDS oo takoor looga raray toban guri
Nin xaaskiisa ku waayay cudurka Koroona oo billaabay olole uu ugu gurmanayo bukaannada isbitaalka De Martiino
Hargaysa: Carruur darbijiif ahaa oo dhaqan-celin loo sameeyay kaddib waalidkood lagu wareejiyay
Jawaab ka bixi Cancel reply
[:so]Receive news updates via email from this site
Radio Ergo · Radio Ergo 2020
Radio Ergo Weekly Newsletter
Tweets by RadioErgo
© Copyright 2014 - 2021 Radio Ergo